Shotcrete Machine, plasta Machine, Concrete mgbapụta - Keming
Service echiche: na-eje ozi na-eji ọkụ na-egbo na-eji ọkụ
Kwesịrị ngo esesịn ọnọ niile akpa nke Gypsum plaster na ga-mkpa, nakwa dị ka ọ bụla mpụga ọkọnọ nke mmiri ma ọ bụrụ na ụlọ ahụ na-adịghị ma ejikọrọ.
Ụfụfụ ihe, a makwaara dị ka aircrete, foamed ihe, foamcrete, cellular fechaa ihe ma ọ bụ belata njupụta ihe, na a kọwara dị ka a cement dabeere slurry, na a kacha nta nke 20% (kwa olu) ụfụfụ entrained n'ime plastic ngwa agha.
Enterprise spirit: Chineke, ibu ọrụ, ọhụrụ, mma
Tọrọ ntọala na 1979
Henan Kol Science Research Institute Keming Mechanical na Ọdụdọ Equipment Co., Ltd. specializes na nnyocha, mmepe, mmepụta na ahịa nke spraying na pumping ngwaahịa na Ngwuputa ngwaahịa. Ọ bụ mbụ nzukọ ịzụlite ma na-emepụta spraying igwe na China na ugbu a, ọ bụ ụkpụrụ maka mmepe nke spraying ụlọ ọrụ na China. unit. Ugbu a, ọ na-mepụtara na-emepụta dị iche iche na iche iche nke Keming ika Ngwuputa (engineering) akọrọ na mmiri spraying usoro ngwaahịa, extrusion nfuli, grouting nfuli na ndị ọzọ nfuli, na ihe karịrị 50 iche.
Enterprise ọhụụ: edu ígwè n'ichepụta ụlọ ọrụ, na-pụtara ìhè e depụtara ụlọ ọrụ
KBT Concrete Ịgwakọta mgbapụta
KH76 sooks mgbapụta
KLW180 plasta Machine
KLW120 plasta Machine
Henan Kol Science Research Institute Keming Mechanical na Ọdụdọ Equipment Co., Ltd.?